Shina sy Frantsa: Atao fahirano ny vita frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2008 21:02 GMT
Ny filazan'ny gazetim-panjakana koa moa vao maika nandrangitra ho amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ny lahatsoratra tao amin'ny China Daily nivoaka tamin'ny 8 desambra ohatra nitsikera ny fanapahan-kevitry Sarkozy ho toy ny “fihantsiana tsy azo leferina”. Ny lahatsoratra hafa tao amin'ny China Review News indray nanome ny lisitry ny fifanarahana lehibe 4 misy eo amin'i Shina sy Frantsa izay mety ho tandindonin-doza manoloana izao fifanolanana ara-diplaomatika misy eo amin'ny roa tonta izao. Naverin'i Guanqiaob navoaka indray izany lisitra izany tao amin'ny bolongany:
Ankoatra ny fiheverana ara-toe-karena dia mifototra kokoa amin'ny resaka foto-kevitra fitiavan-tanindrazana no aely amin'ny aterineto. Ohatra azo raisina amin'izany ny antson'i 16fang hanao fahirano sy ny fitodihana ny tantara:
NIsy hafatry ny tia tanindrazana iray nivezivezy tamin'ny alalan'ny QQ sy fifandraisana tsiroaroa (peer to peer) hafa. Lindsey CN dia efa nandika ity hafatra ity tany amin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Global Voices tany alohaloha tany:
Namelabelatra teti-panorona ho amina fahirano lavitr'ezaka kosa i Dream2008 :
Tsy ny mpiserasera rehetra,na izany aza, no manohana ny fahirano, Tsy resy lahatra amin'izany fihetsika izany i amoiist :
Nanambara i Kaoifeng fa tsy hanao izany fahirano izany izy:
Ataon'i Twocold fanalan'andro ny lisitry ny fandaharana sy ny antony hanaovana fahirano: